Attenuation တိုက်ရိုက်ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေး၏ Bulk
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Attenuation တိုက်ရိုက်ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေး၏ Bulk(24 များအတွက်စုစုပေါင်း Attenuation တိုက်ရိုက်ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေး၏ Bulk ထုတ်ကုန်များ)
Attenuation တိုက်ရိုက်ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေး၏ Bulk - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
ကျနော်တို့တရုတ်ထံမှ Attenuation တိုက်ရိုက်ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေး၏ Bulk ထုတ်လုပ်သူ & ပေးသွင်း / စက်ရုံအထူးပြုနေကြသည်။ အရည်အသွေးမြင့်မားအဖြစ်အနိမ့်သောစျေးနှုန်းနှင့်အတူလက်ကား Attenuation တိုက်ရိုက်ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေး၏ Bulk / စျေးပေါ, တရုတ်ထံမှအမှတ်တံဆိပ်ဦးဆောင်သည့် Attenuation တိုက်ရိုက်ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေး၏ Bulk များထဲမှ Changchun BCHT Biotechnology Co. ။
tag ကို: attenuation တိုက်ရိုက်ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေး၏ bulk , ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေး၏ semi-ချောထုတ်ကုန်များ , အမြင့် Titer နဲ့ Immunization ထိရောက်မှု
ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေး, တိုက်ရိုက် Semi-ချောထုတ်ကုန်များ၏ bulk gelatin-အခမဲ့၏ 1.Good ဘေးကင်းလုံခြုံရေး တိရိစ္ဆာန်များကိုမခံမ gelatin င်ပထမဦးဆုံး lyophilized ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေး, တီထွင်ခြင်းနှင့်တရုတ်နိုင်ငံတွင်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေးကနေ gelatin...
ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေး attenuation ၏ bulk
tag ကို: Bioproducts Semifinished ထုတ်ကုန်များကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ , Semifinished ထုတ်ကုန်များမြင့်မားသောအာနိသင်ကနျြးမာရေး , ဆေးပညာ Prefilled ဆေးထိုးအပ်ကောင်းမွန်သောအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး
ကာကွယ်ဆေးနှစျယောကျဆေးများရေကျောက်ကာကွယ်ပေးနိုင်မှာထိရောက်သောအကြောင်းကို 90% ရှိပါတယ်။ သငျသညျကာကှယျဆေးထိုးရသည့်အခါ, သင်သည်သင်၏အသိုင်းအဝိုင်းအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်နှင့်အခြားသူများကာကွယ်ပေးသည်။...
ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေး Lyophilized ၏ bulk
tag ကို: ကာကွယ်ဆေးထိုး Semifinished ထုတ်ကုန်များကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ , ကာကွယ်ဆေးထိုးအမြင့်အာနိသင်ကနျြးမာရေး , Bioproducts Semifinished ထုတ်ကုန်များမြင့်မားသောအာနိသင်
ငါဘာလုပ်သင့်လဲ? သင်ကစောင့်ဆိုင်း can`t တစ်ဦးပြင်းထန်မတည့်တုံ့ပြန်မှုသို့မဟုတ်အခြားအရေးပေါ်သည်ထင်ပါက, 9-1-1 ကိုခေါ်ခြင်းနှင့်အနီးဆုံးဆေးရုံကိုရ။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုစောင့်ရှောက်မှုပေးသူကိုခေါ်ပါ။ အဲဒီနောက်တုံ့ပြန်မှုစနစ် (VAERS)...
tag ကို: ကာကွယ်ဆေးထိုး Bioproducts အမြင့်အာနိသင် , ကာကွယ်ဆေးထိုး Bioproducts ကနျြးမာရေး , ကာကွယ်ဆေးထိုး Semifinished ထုတ်ကုန်များမြင့်မားသောအာနိသင်
အဘယ်အရာကိုတစ်ဦးလေးလေးနက်နက်ပြဿနာရှိလျှင်? ငါအဘို့အဘယ်သို့ကိုကြည့်သင့်သလဲ ထိုကဲ့သို့သောပြင်းထန်မတည့်တုံ့ပြန်မှုလက္ခဏာ, အလွန်မြင့်မားအဖျား, ဒါမှမဟုတ်ပုံမှန်မဟုတ်သောအပြုအမူသကဲ့သို့သင်တို့စိုးရိမ်ကြောင့်ဘာမှများအတွက်ရှာဖွေပါ။...
ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေးအစုလိုက် Lyophilized attenuation တိုက်ရိုက်
tag ကို: ကြိုတင်ကာကွယ်မှု Semifinished ထုတ်ကုန်များကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ , မြင့်မားသောအာနိသင်ကနျြးမာရေးကြိုတင်ကာကွယ်မှု , ကာကွယ်ဆေးထိုး Bioproducts Semifinished ထုတ်ကုန်များ
ဤကာကွယ်ဆေးကိုပြီးနောက်ဖြစ်ပျက်နိုင်ကြောင်းကိုအခြားအမှုအရာ: ပြည်သူ့တခါတရံကာကွယ်ဆေးအပါအဝင်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ, ပြီးနောက်မော။ ထိုင်လျက်သို့မဟုတ်အကြောင်းကို 15 မိနစ်လဲလျောင်းနေတဲ့ကျဆုံးခြင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့မောဒဏ်ရာတားဆီးကူညီပေးနိုင်ပါသည်။...
ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေးအစုလိုက် Lyophilized attenuation
tag ကို: Bioproducts အမြင့်အာနိသင်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး , ကြိုတင်ကာကွယ်မှု Bioproducts ကနျြးမာရေး , Semifinished ထုတ်ကုန်များမြင့်မားသောအာနိသင်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး
ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေးထိုးအောက်ပါပိုမိုလေးနက်ဖြစ်ရပ်များရှားပါးဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကပါဝင်နိုင်ပါသည်: ဖမ်းဆီးရမိ (jerking သို့မဟုတ်စိုက်ကြည့်) မကြာခဏအဖျားနှင့်ဆက်စပ် အဆုတ် (အဆုတ်ရောင်) သို့မဟုတ်ဦးနှောက်နှင့်ကျောရိုးဖုံး (နှောက်အမြှေးရောင်) ၏ရောဂါကူးစက်...
tag ကို: ကာကွယ်ဆေးထိုးအမြင့်အာနိသင်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး , ကာကွယ်ဆေးထိုးကျန်းမာရေးကြိုတင်ကာကွယ်မှု , ကြိုတင်ကာကွယ်မှု Bioproducts Semifinished ထုတ်ကုန်များ
ကာကွယ်ဆေးတုံ့ပြန်မှုများ၏အန္တရာယ်များ ကာကွယ်ဆေးအပါအဝင်မည်သည့်ဆေးဝါးနှင့်အတူ, တုံ့ပြန်မှုတစ်ခုအခွင့်အလမ်းလည်းမရှိ။ ဤရွေ့ကားများသောအားဖြင့်ပျော့ဖြစ်ကြပြီးသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အပေါ်သွားပေမယ့်လေးနက်သောတုံ့ပြန်မှုကိုလည်းတတ်နိုင်သမျှဖြစ်ကြသည်။...
ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေးတိုက်ရိုက် attenuation Lyophilized
tag ကို: Semifinished ထုတ်ကုန်များမြင့်မားသောအာနိသင်ဆေးပညာ , Semifinished ထုတ်ကုန်များကျန်းမာရေးဆိုင်ရာဆေးပညာ , မြင့်မားသောအာနိသင်ကနျြးမာရေးဆေးပညာ
ရေကျောက် (ရေကျောက်) ကာကွယ်ဆေး သင်သိပါဖို့လိုအဘယ်အရာကို အဘယ်ကြောင့်ကာကွယ်ဆေးထိုးရ? (စရေကျောက်ကိုခေါ်) ရေကျောက်ဟာအလွန်ကူးစက်တတ်သည့်ဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာရေကျောက် zoster virus ကိုခံစားရစေပါသည်။ ရေကျောက်များသောအားဖြင့်ပျော့ဖြစ်ပါသည်,...
ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေး Lyophilized attenuation
tag ကို: Bioproducts Semifinished ကုန်ပစ္စည်းများဆေးပညာ , Bioproducts အမြင့်အာနိသင်ဆေးပညာ , Bioproducts ကျန်းမာရေးဆေးပညာ
ကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်မှုနည်းစနစ်ဖြစ်ပေါ်နေသောနေကြသည်။ ယဉ်ကျေးမှုနို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေဆဲလ် သာ. ကြီးမြတ်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ညစ်ညမ်းမှုနှင့်အတူပြဿနာများအနိမ့်ဖြစ်ပွားမှုကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောကြက်သားကြက်ဥအဖြစ်သမားရိုးကျ options တွေကိုနှိုင်းယှဉ်, ပို. ပို....
tag ကို: ဇီဝဗေဒထုတ်ကုန်များမြင့်မား Titer အမြင့်အာနိသင် , အမြင့်အာနိသင် Attenuated ဇီဝဗေဒထုတ်ကုန်များ , ထုတ်ကုန်များမြင့်မား Titer အမြင့်အာနိသင်ပြီးဆုံး
cowpox (heterotypic ကာကွယ်ဆေးထိုး) ၏ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကနေပစ္စည်းနှင့်အတူကာကွယ်ဆေး၏နိဒါန်းမတိုင်မီကကျောက်ရောဂါတမင်အားဖြင့်တားဆီးနိုင်မည် inoculation အကြာတွင်အဖြစ်ရည်ညွှန်း, ကျောက်ရောဂါဗိုင်းရပ်စ်ပိုး၏ variolation ကနေခွဲခြားရန် ကျောက်ရောဂါကာကွယ်ဆေးထိုး...
ရေကျောက် Lyophilized attenuation များအတွက်ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေး
tag ကို: ရေကျောက်အမြင့် Titer Bioproducts , ရေကျောက် attenuation Bioproducts , ဇီဝဗေဒထုတ်ကုန်များထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ Bioproducts Finished
valence ကာကွယ်ဆေး monovalent (စ univalent ကိုခေါ်) သို့မဟုတ် multivalent (စ polyvalent ခေါ်) ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ တစ်ဦးက monovalent ကာကွယ်ဆေးတစ်ခုတည်းကိုပဲသို့မဟုတ်တစ်ခုတည်းသောဇီဝဆန့်ကျင်မှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ တစ်ဦးက multivalent...
ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေး၏ bulk အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေး attenuation ၏ bulk အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေးအစုလိုက် Lyophilized attenuation တိုက်ရိုက် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေးအစုလိုက် Lyophilized attenuation အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေးအစုလိုက်တိုက်ရိုက် attenuation အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေးတိုက်ရိုက် attenuation Lyophilized အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေး Lyophilized attenuation အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေး attenuation အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ရေကျောက် Lyophilized attenuation များအတွက်ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေး အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Wholesale Attenuation တိုက်ရိုက်ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေး၏ Bulk from China, Need to find cheap Attenuation တိုက်ရိုက်ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေး၏ Bulk as low price but leading manufacturers. Just find high-quality brands on Attenuation တိုက်ရိုက်ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေး၏ Bulk produce factory, You can also feedback about what you want, start saving and explore our Attenuation တိုက်ရိုက်ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေး၏ Bulk, We'll reply you in fastest.